”Madaxweyne, fadlan kordhi kana dhabee!” – Talo la siiyay MW Farmaajo | Hadalsame Media
Home Maqaallada ”Madaxweyne, fadlan kordhi kana dhabee!” – Talo la siiyay MW Farmaajo
”Madaxweyne, fadlan kordhi kana dhabee!” – Talo la siiyay MW Farmaajo
(Hadalsame) 22 Abriil 2019 – Qormadeydan aadka u koobani ma ahan qiimeyn siyaasadda Dowladda. Mana ahan xataa qiimeyn khudbadda uu Madaxweynuhu shalay jeediyay oo dhan.
Waa isku day aan weyneyso dul joojinayo muhiimad iiga dhex muuqatay khudbadda. Waa sida uu u wajahay mid ka mid ah mowduucyada uu khudbaddiisa ku soo qaatay.
Waxaan rajeynayaa in Madaxweynaha ay ka tahay siyaasad cusub oo ay Dowladdu qaadatay, taas oo ku saleysan daraasad wadata baaris iyo lafa-gur, laga baaraan degay, gooreysan, miisaaniyaddeeda leh, aan lala daahin ku dhaqaaqiddeeda, daba-gal iyo dhammaystirna leh si looga miro dhaliyo.
Waxay ila tahay hadalkani in uu mudan yahay in si gooni ah dhug loogu lahaado, in la taageero, qofkii awoodaana uu talo iyo gacanba ka geysto in dagaalka Shabaab lagu xalliyo hab aan ahayn xabbad iyo dayaarad xambaarsan keliya gantaallo iyo ama bambaanooyin.
Ayada oo aan ognahay in hordhaca weerarkaas ama jawaabtiisu ay tahay Qarax caasimadda ka dhaca oo aan dadka loo kala aabbayeelin iyo isu socodka gobollada dalka iyo xataa caasimadda dhexdeeda oo ma-jire ku negaada.
Previous articleGOOGOOSKA: Chelsea vs Burnley 2-2 (Blues oo baytkeeda ku baxsan waydey)
Next articleSida uusan SHARCIYAD u haysanin shirka & soo jeedinta Nairobi